Iindaba -Ukukhanyisa iAina ukuseta iOfisi yaseBeijing nge-Sep 16th, 2019.
Uhlobo lokukhanyisa lusete iOfisi yaseBeijing ngomhla we-16 kuSepthemba 2019.
Aina Lighting iseke iOfisi yaseBeijing ngo-Sep 16th, 2019.
I-Aina Lighting yasekwa ngo-2016, kude kube ngoku sele ineminyaka emi-6. Yonke le minyaka mi-6, sineofisi enye yokuthengisa eShanghai. Njengentengiso esinayo, iofisi yokuthengisa enye ayisonelanga kuthi, ngenxa yoko sikhetha iBeijing njengendawo yeofisi yethu yesibini.
IOfisi yaseBeijing ijolise ikakhulu kwiShishini lokuThumela ngaphandle. Iya kulawula yonke intengiso yaphesheya. Izibane zethu sele zifikelelwe kumazwe angaphezu kwe-10 anjengePhilippines, iThailand, iNigeria, iZambia, iFrance, iOstriya, iUK, iPoland, iFiji, iPeru, iJamaica nePeru.
Emva kokuba kusekwe iofisi yaseBeijing, iofisi yaseShanghai njengendlunkulu yethu iya kuba ikakhulu kwimarike yendawo kunye noyilo olutsha lokukhanyisa. Iziko le-R & D liya kusekwa kwiziko laseShanghai. Kwaye iofisi yaseShanghai iya kuba yibhulorho phakathi kwentengiso kunye neefektri zethu.
Iofisi yaseBeijing iya kuqala ukusuka kubameli abahlanu bokuthengisa. Amasebe amathathu aza kusekelwa i-ofisi yase-Beijing kwisithuba seminyaka emibini. La masebe mathathu ubukhulu becala aMazwe aseYurophu kunye neAsia, intengiso yoMbindi noMzantsi Melika, amazwe aseAfrika kunye neOceania. Abantu abohlukeneyo baya kujongana neemarike ezahlukeneyo kwaye iimarike ezahlukeneyo ziya kusebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokukhuthaza, ukuze sizazi ngcono iimarike zaphesheya kunangaphambili. Izibane zethu ziya kuphuculwa ngokusekwe kwiimfuno ezahlukeneyo ezivela kwiimarike ezahlukeneyo.
Iofisi yeAina Beiijng iseChangping, ebizwa ngokuba yiyadi yangasemva eBeijing. Kukwasisikhululo sikaloliwe esingaphantsi komhlaba somgaqo weChangping, kunye nesikhululo seenqwelomoya saseBeijing ekulula ukuba batyelele abathengi.
Igumbi lokubonisa elitsha liza kusekwa kungekudala kwiofisi yaseBeijing, ukuze abathengi babone zonke izibane kwiofisi yethu yokuthengisa ngaphambi kokuba bafike kumzi-mveliso. Zonke izibane eziphethwe yiAina Lighting ziya kudweliswa kwigumbi lethu lokubonisa kwiofisi yaseBeijing.
I-Ofisi yokuKhanyisa iBeijing iza kuphuhliswa kakuhle kungekudala! Ndiyathemba ukuba singaseta iiofisi ezininzi apha e-China okanye kwamanye amazwe kungekudala.